Vidio> = Ihe oyiyi + Akụkọ | Martech Zone
Ndị mmadụ anaghị agụ. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe jọgburu onwe ya ikwu? Dịka onye na - ede blọgụ, ọ na - emetụ mmadụ n’obi mana ekwesịrị m ikweta na ndị mmadụ anaghị agụ. Ozi ịntanetị, mkpokọta weebụ, blọọgụ, akwụkwọ akụkọ, pịa a, arụmọrụ chọrọ, nnabata nkwekọrịta, usoro ọrụ, ihe okike creative. ọ dịghị onye na-agụ ha.
Anyị na-arụsi ọrụ ike - naanị anyị chọrọ ịza azịza ma achọghị ịhapụ oge. Anyị n'eziokwu anaghị enwe oge.
Nke a izu bụ a marathon izu m na-ede ụfọdụ ahịa ihe, na-aza ozi ịntanetị, na-ede akwụkwọ achọrọ akwụkwọ maka mmepe, na mwube atụmanya na atụmanya na ihe anyị nwere ike ịnapụta… ma ọtụtụ n'ime ya na-adịghị e kpamkpam eri. M na-amalite ịmata otú ihe ndị ọzọ mmetụta na ihe oyiyi na akụkọ ndị na-na ahịa okirikiri, mmepe okirikiri na mmejuputa okirikiri.
O doro anya na eserese dị mkpa iji mepụta akara anụ ahụ na ebe nchekwa ndị mmadụ. Ikekwe ọ bụ otu n'ime ihe kpatara ya Nkịtị Ndị Nkịtị na-aga nke ọma na ha videos.
N'ọnwa ikpeazụ a, anyị ejirila ehihie na abalị na a RFP ebe anyị zara ọtụtụ ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị na ike ya. Anyị wụsara okwu ahụ, wuru nnukwu eserese ma nwee ọtụtụ nzukọ anyị na ụlọ ọrụ, ma n'onwe anyị ma site na ekwentị. Ọbụna anyị kesara CD mmekọrịta nke bụ nyocha nke azụmahịa na ọrụ anyị.
Ná ngwụsị nke usoro ahụ, anyị na-achọta onwe anyị # 2 na-agba ọsọ.
N'ihe niile n'eziokwu, mkparịta ụka olu niile, ngwa ahịa na akwụkwọ anyị nọrọ ọtụtụ awa ka edobeghị onye ahịa anya na ọ dị nkenke. anyị nwere isi atụmatụ na ha chọrọ. Anyị mere… mana na nchịkọta niile nke akwụkwọ, nzukọ, izi ozi, wdg, ozi ahụ furu efu.
Ọ bụghị ihe nzuzu na ụlọ ọrụ dị na ọnọdụ # 1 enweela ohere iji gosipụta nke ọma (n'ime ụlọ nyocha ụlọ) ya na onye ahịa ya nwere ike ịnapụta. E webatara anyị na usoro a n'oge na-adịghị anya ma ghara ịkwanye maka ngosipụta ụlọ. Obi siri anyị ike na anyị agwala anyị nke ọma azịza ha chọrọ.
Anyị ezighi ezi.
Nzaghachi si ahịa bụ na anyị ngosipụta bụ kwa oru ma kọrọ na anụ nke ihe onye ahịa choro. Anaghị m ekwenye - anyị lekwasịrị anya na ngosipụta anyị niile maka akụkụ ọrụaka nke sistemụ anyị nyere na ụlọ ọrụ nwere ọdịda dị njọ na onye na-ere ha na mbụ. Anyị maara na ngwa anyị kwụụrụ onwe ya, yabụ anyị chọrọ ịkụ n'ụlọ na otu teknụzụ anyị si dị iche na mkpa ha.
Ha amaghi nke ahu.
N'ileghachi anya na ya, echere m na anyị nwere ike ịda ụda nke oku, akwụkwọ na ọbụlagodi eserese ahụ ma tinye ọnụ vidiyo nke otu ngwa ahụ siri rụọ ma gafere atụmanya ha. Amaara m na m na-ede ọtụtụ ihe banyere vidiyo n'oge na-adịbeghị anya na blọọgụ m - mana m na-aghọ onye kwere ekwe na usoro.
Tags: video vidioVidio Ahịavideo ogen'ireyoutube
Feb 9, 2008 na 7:24 PM
Agwara m Mark banyere nke a taa na Bọọlụ Nkata, ihe mbụ m jụrụ ya bụ “ị sere onye ahịa ahụ ihe osise?” Na ahụmịhe m, ọ dịghị ihe na-ewetara mkparịta ụka azụmahịa na teknụzụ ọnụ karịa mkparịta ụka "bọọdụ ọcha" dị ndụ ebe ị na-enweta njikọ niile, sistemụ, ihe kpatara ya, ndị ọrụ, wdg na bọọdụ na mkparịta ụka na ndị ahịa. Ekwenyere m na ọ dịghị onye na-agụ ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na m dee ihe, ọ na-amasị m iji okwu onye ahịa na-agụ ya maka okwu - nke mere na akwụkwọ ahụ dị mkpụmkpụ.
Ndo maka ogologo ikwu, mana ị kụrụ bọtịnụ ọkụ, m wee banye na mkparịta ụka taa…
Feb 10, 2008 na 3:04 PM
Mkparịta ụka gị na Mark gbara ume na blọgụ a ma ekwenyere m gị. N'iburu olu nke ihe dị anyị mkpa iji mee ka atụmanya a pụta n'oge dị mkpirikpi, echere m na ịgabiga ihe oyiyi ga-adị mkpa - ikekwe ngwakọta nke onyonyo, ihe ngosi edere na ngosipụta ndụ.
O doro anya na anyị etinyela aka na nhịahụ site na mbido - ụlọ ọrụ ọzọ ahụ etinyegoro na-enweghị ihe ọmụma anyị - mana eziokwu ahụ bụ na anyị nwere ngwaahịa ka mma ga-araparakwu karịa ma ọ bụrụ na anyị hapụrụ ndị niile sonyere ya na ebe nchekwa doro anya nke ngwaahịa anyị. 'ikike ka mma.
Daalụ maka mmụọ nsọ!
Feb 10, 2008 n’elekere 12:22 nke abali
Ndo nụ na ị naghị ere ọrịre ahụ. A na-enwe ekele maka eziokwu gị. Ọ bụ ahụmahụ na-eweda ala ka ị bụrụ 2nd na ihe dị mkpa. Ọ dị ka ị kụrụ ntu na isi ya na nghọta gị na vidiyo vidiyo. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ngosi ahịa dị ka ahụmịhe mmụta maka ndị ahịa, ị ga-echeta na ndị mmadụ na-amụta ụzọ dị iche iche. Ndị nkuzi mara na ụfọdụ mmadụ na-arụ ọrụ mmụta site na ịge ntị, ụfọdụ mmadụ na-arụ ọrụ mmụta site n'ịgụ ihe, ụfọdụ mmadụ na-arụ ọrụ mmụta site na ịme. Ọ bụrụ n ’inye ụdị ahụmịhe mmụta dị iche iche, ị ga-eru ebum n’uche gị nke inye ọzụzụ. Nwere ike ịnwe ọtụtụ nkwupụta dị iche iche na ụdị dị iche iche a kwadebere tupu oge eruo, ma tụọ ndị na-ege gị ntị n'oge ngosi ahụ. Ọ bụrụ na ha nye gị obere ntụpọ dịka ịsị “Anụrụ m gị, Doug”, ma ọ bụ “Anaghị m ahụ ebe ha na-aga ebe a”, ị ga - enweta obere nghọta n’ime ụdị mmụta ha… .. wee gaazie na ntụnye ahụ. . Jisie na ihe ngosi na-esote. Na ekele maka obere obere vidiyo dị na blọọgụ na saịtị Commoncraft! Nke ahụ dị nnọọ ọhụrụ! Nakwa ekele maka backlinks site na okwu gara aga… M na-etinye blog gị na ndepụta m nke blọọgụ na no-nofollow na saịtị m!
Feb 10, 2008 na 3:06 PM
Daalụ Penny! Okwu gị dakwasịrị ihe dị oke mkpa - na ebumnuche anyị bụ gụọ onye ahịa ahụ. A sị na ọ bụ ụlọ klasị, ụmụ akwụkwọ anyị ga-akụ. Anyị kwesịrị ịbụ ndị nkuzi ka mma!
Feb 10, 2008 n’elekere 4:29 nke abali
Akwa post, Doug. Azịza m ghọrọ ogologo oge, na m mere ya post, kama ikwu okwu:
Ike vidiyo = akụkọ dị ukwuu + nnukwu ogbugbu
Feb 10, 2008 na 3:09 PM
Akwa post, Martin! M ga-akwado onye ọ bụla gụrụ akwụkwọ a ka ọ gabiga nke gị.
Feb 11, 2008 n’elekere 8:46 nke abali
Enwere ụkpụrụ abụọ bụ isi nke ọ bụla ahịa kwesịrị ịgbaso:
Iwu # 1 (site na akwụkwọ akụkọ) - Onye ọ bụla nwere ọkwa ọgụgụ na nlebara anya nke nwa akwụkwọ 6. Jiri ahịrịokwu dị mkpirikpi na obere okwu. Ihe ọmụma dị mkpa na-ebu ụzọ, nke na-adịchaghị mkpa na-aga nke ikpeazụ.
Iwu # 2 (site na ịzụ ahịa) - Anyị na-agbagha anyị ihe karịrị 30,000 ozi na-eme ka mmadụ kwenye kwa ụbọchị (nke a abụghị naanị mgbasa ozi). Iji belata ihe ndozi, ọbụlagodi ndị nwere ọgụgụ isi, ịkwesịrị ịgbaso Iwu # 1.
Ezigbo RFP bụ naanị peeji ole na ole ga-eleba anya na mkpa ndị ahịa ahụ nwere, ọ bụghị ikwu maka ụlọ ọrụ na-aza, usoro ha, ma ọ bụ tinye ọtụtụ na ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ịmee, tinye ha na ndeksi, kama gụnye naanị ihe ndị ị ga-enwerịrị.